Aragtida Dadweynaha Archives - Page 2 of 10 - FOOLAAD MEDIA
Home » Aragtida Dadweynaha (page 2)
Waa Maxay Adeegga Forex? [Warbixin+Video].
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdishu kusoo kordhay ganacsi cusub oo lagu magacaabo FOREX Trade afka Soomaaliga ahna lagu yiraahdo Sarrifka lacagaha qalaad ee Internetka,hadaba waxaan akhristayaasheena usoo gudbineynaa sharraxaad kooban oo ku saabsan ganacsiga Forex Trade. Waa maxay Forex? Foreign Exchange Trade waxaa sidoo kale loo yaqaan Forex ama FX, waa ganacsi caalami ah ...
Ma U Muuqataa In Maraykanku Ku Fashilmay Qorshihii Uu Degsaday Muddo 200 Sano Laga Joogo Ee (American Grand Strategy)
Waxa beryahan aad loo hadal hayaa in Maraykanku ka baxayo meelo badan oo uu awal ku lugo ballaarsaday isaga oo is bidaya awood dhaqaale iyo mid ciidanba. Siyaasiintii soo maray Maraykanka ee labadii qarni ee tagay ayaa dejiyey qorshe siyaasadeed, mid ciidan iyo mid dhaqaaleba taas oo ahayd in ay caalamka ku qabsadaan waxa loo yaqaan sumcad (prestige) ciddii diiddana ...
Hal Qarni Ayaa U Dhaxeya Labada Magac Ee Soomaaliya Lagula Diriray Ee Kala Ah MAADH MULLAH & ARGAGIXISO.
Hogaamiye yaashii dagaalkii ay dowladaha reer galbeedku lagaleen Daraawiishtii Soomaaliyeed waxaa kamid ahaa ninkii caanka ahaa ee lagu magacaabi jiray Koofil ee hogaaminaayey ciidamo madoow oo isugu jira Soomaali iyo Afrikaan kaleba iyo saraakiil caddaan ah. Waa caadi meelaha uu gumeysigu ka jiro wax yaabaha lagu garto waxaa kamid ah inay ciidamo calooshood u shaqeystayaal dabadhilifyo ah qortaan si ay ...
Ku Darso Tilmaamahan Garashada Tolmoon – Dr. Cabdulqani Beder
Kawkan aynu ku nool nahay waxa uu ku shaqeynayaa sharci la yidhaahdo “Sunnada kawnka”, waa xeer jaango’an oo Alle dejiyey, wax kastaana ku kala socdaan. Cumriga adduunkani waa “xidhmooyin xilliyeed” is daba socda oo is gedgeddiyaya. Xidhmooyinkaasi waxa ay leeyihiin saameyn xilli, waxa kale oo ay leeyihiin muuqaallo astaamo gaar ah ku suntan, tusaale ahaan, waxa uu xilligu noqon karaa ...
Farmaajo Iyo Xassan Sheekh Hal Meel Bay Ka Siman Yihiin. (Maqaal)
Magacayga waxaa la yiraahdaa Diraac Xaashi oo 64 jir ah. Waxaan joogaa dalka Norwey waxaana jecleystay in aan bulshada ku baraarujiyo qodob ay ka simman yihiin Farmaajo iyo Xassan Sheekh, qodobkaasoo dhibaatadiisa xambaarsan. Shabakadda Amiirnuur waxaan idiinka rajeynayaa inaad baahisaan Maqaalkan. Anigu maahi dadka sheekada badiya. Waxaan taabanayaa nuxurka. Xassan Sheekh Maxamuud haddaan ku horreeyo wuxuu sheegan jiray inuu yahay ...
Kala Durugsanaa Ciidankii Dilay Ninkii Nabiga Sheegtay & Kuwii Difaacay [Maqaal].
قال الله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا Sideedada dagaalka dunida ka socda waa mid u dhaxeeya dadka ay sheegtay aayadda Qur’aanka ah ee sare ku xusan. Waa kuwa Mu’miniin ah oo ku dagaalamaya jidka Alle iyo qaar Gaalo ah oo ku dagaalamaya ...
Qurba-Joog & Qolqol-Joog Kee Bay Ku Qaraabanayaan Quwadaha Shisheeye? (Maqaal)
Akhistayaal waxaan halkan kusoo gudbinayaa maqaal aan ku eegayo xaalado dhab ah oo dalka ka jira balse laga yaabo iney dadka qaar ka daahsoon yihiin, qaarna iyagoo og ay is moogeysiinayaan. Inkastoo dalka Soomaaliya lagu soo qaaday duullaan ayaa haddana waxaa jirta Maahmaah Soomaaliyeed oo oranaysa (Gudiney ima goyseen haddaan gabalkey kugu jirin) taasoo micnaheedu yahay ineysan maanta shisheeye dalka ...
Hadii Kaynta Dab Qabsado, Ayaxu Ma Helo Wakhti Uu Isku Mac-salaameeyo. [MAQAAL]
Nin darwiish ah oo wax badan ka qayb qaatay halgankii hubaysnaa ee gobanimo-doonka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulle Xassan hogaaminayey ayaa markii la jabay oo diyaarado lagu garaacey daraawiishta, Taleex na laga baxay, wuxuu ka mid noqday dadkii soo laabtey, maalin subax hore ayuu wuxuu fuulay mid ka mid ah buuraladayda kuyaala dhulka Nugaasha. sidaas ayuu wuxuu isha ula raacay ...
Lix Qalad Oo Ay Tahay In Laga Feejignaado Marka Baradhada La Shiilayo
Dad badan waxaa garaadkooda ku jirta in baradhada oo biyo lagu kariyaa ay arrin fudud tahay, waana ay saxanyihiin marka sidaa guud loo qiimeeyo. Laakiin waxaa muhiim ah in maskaxda lagu hayo in ay jiraan qaladaad badan oo dhaca xilliga baradhada la karinayo, kuwaas oo ay muhiim tahay in laga feejignaado si loo helo baradho dhadhankeedu fiican yahay, caafimaad ahaanan ...
Waa La Yaaban Yahayee’ Amakaagse Waaka Danbeeya!! — W/Q Liibaan-Shaadiro
Bismillahi Raxmani Raxiim magaca Eebe, Sareeye ayaynu ku bilaabaynaa, maanta waxaan rabaa inaan ka jawaabo su’aal inbadan dhalinyarta aanu nahay bahwadaagta qalinka iyo waxbarashadu ay I waydiiso oo ah Liban waxaad soo baratay kuliyada Arrimah Siyaasada Iyo xidhiidhka calamiga ah; Muddo ku dhaw 9 sanno na waxaad ahayd Barre jamacadeed. Madama oo dalkeena siyaasaddiisina ay imika hadal haynteedu badatay maxaad ...